Open Circle - Afsoomaali
Recommended Children's Literature
Barnaamijka ‘Open Circle’ wuxuu ardayda baraa xirfadaha bulshada iyo kuwa caadifadeed ee ilmaha ka caawin kara inay yeeshaan xiriiro saxa ah oo ay la yeeshaan dadka kale iyo inay noqdaan bartayaal guuleysta. Barnaamijka ‘Open Circle’ wuxuu ardayda baraa xirfadaha bulshada iyo kuwa caadifadeed ee ilmaha ka caawin kara inay yeeshaan xiriiro saxa ah oo ay la yeeshaan dadka kale iyo inay noqdaan bartayaal guuleysta.
Goolasha casharadu waa in la abuuro jawi amaan ah oo leh daryeel wacan oo ardayda lagu diiri-galiyo iyo in ilmaha la siiyo xirfadaha ay u baahan yihiin inay guuleystaan xag tacliineed, iyo xalinta mashaakilka dadka dhex mara iyo dhisidda wada xiriirka dadka oo sax ah.
Halkan waxa ku qoran tusaalooyin ka mid ah kalmahada muhimka ah ee ilmahaagu ku baran doona casharada ‘Open Circle’ marka ay dugisga joogaan.
Ally: Waa qof u hadla oo ficil u sameeya qof kale oo uu caawinayo.
Hadalka Jirka (Body Language): Waa jir-ka-hadalka dareenka qofka iyadoo la isticmaalayo wajiga, jirka, ama gacmaha.
Maskaxda (Brainstorming): Ka fakarka afkaarta.
Dabeecadda Daandaansiga (Bullying Behavior): Waa marka hal qof ama dad ka badani ay si adag ama si celcelis ah qof kale wax u yeelaan iyagoo isticmaalaya kalmado ama gacan saar.
Ag-joogaha (Bystander): Waa qof goob joog ka ah meel wax ka dhacayaan.
Tartiib U-neefsashada (Calm Breathing): Waa neefsashada si dheer neefta loo nuugo oo loo sii daayo si tartiib ah si loo dareemo deganaansho iyo furfurnaan jirka ah.
Amaanta (Compliment): Waa marka aad wax fiican ka sheegto qof kale.
Wax Wada-qabsi (Cooperate): Waa marka la wada shaqeeyo si wax loo wada qabto.
Dabeecadaha Khatarta ama Burbur (Dangerous and Destructive Behaviors): Waa falalka khatarta ah (oo qof lagu dhaawaco) ama burbur leh (oo walax lagu jabin karo). Marka ay ilmuhu arkaan dabeecad khatar ah ama burbur leh,waa inay isla markiiba u sheegaan qof weyn oo mas’uul ah.
Xeerarka Aan Laga Wada Hadli Karin (Nonnegotiable Rules): xeerarka aan la beddeli karin.
Ishaarooyinka Aan Hadalka Ahayn (Nonverbal Signals): Waa hab loo wada hadlo iyada oo aan hadal la isticmaaleynin.
Shirka Wareegga Furan (Open Circle Meeting): Waa waqti ay ardaydu dugsiga dhexdiisa ku bartaan oo ay ku camal falaan xirfado gaar ah oo bulshonimo iyo cadifadeed oo ardaydaas ka caawin doona inay sameystaan xiriiro saxa ah oo ay noqdaan wax-bartayaal guuleysta. Xilliga kullanka ayaa ardayda iyo macalinkooda fariistaan kuraas wareegsan.
Hogaamiyaha Toggan (Positive Leader): Waa qof qabta waxyaalo uu ku caawinayo kooxda oo sameeya tusaale wacan.
Isla-Hadalka Toggan (Positive Self-Talk): Waa hab aad isku diirigelin kartid inaad wax qabsatid.
Mushkiladda (Problem): Waa waxa qofka ku keena inuu wareero ama uu murugoodo.
Milicsiga (Reflection): Waa hakinta naftaada inaad wax iska weydiiso khibrad ku soo martay.
Wax Dhageysiga Fiirinta ah ee Dugsiga (School Listening Look): Waa hab aad dadka kale u-dhageysan kartid dugsiga dhexdiisa: Adigoo fadhiya dhaqdhaqaaq la’aan, adigoo qofka hadlaya si toos ah u eegaya, oo dagaha u raaricinaya.
Kor u-hadalka (Speaking Up): Waa hab aad ula hadli kartid koox dugsiga dhexdiisa si loo maqlo oo loo fahmo fikirkaaga iyo ra’yigaaga: Waxaad u hadashaa si tartiib ah, oo cadcad, oo wax yar oo ku filan kor u kacsan.
Dabeecadaha Khatarta ama Burbur (Dangerous and Destructive Behaviors): Waa falalka khatarta ah (oo qof lagu dhaawaco) ama burbur leh (oo walax lagu jabin karo). Marka ay ilmuhu arkaan dabeecad khatar ah ama burbur leh, waa inay isla markiiba u sheegaan qof weyn oo mas’uul ah.